Shiinaha Shiinaha - Androidsis | Androidsis (Bogga 2)
Cubot P40 waa taleefanka soo socda ee soo saaraha Aasiya si loogu daro kamarad afar geesood ah oo loo yaqaan 'Budget King'. Waxay imaan doontaa 10 maalmood gudahood.
Naqshadeynta taleefanka cusub ee Cubot ayaa la muujiyay
Cubot waxay bixisay faahfaahinta ugu horreysa ee taleefankeeda soo socda: Cubot 20. Qalab 4G ah oo la heli doono 1da Juun.
Tecno Spark 5: telefoon cusub oo afar geesle ah iyo Android 10
Tecno Mobile waxay ku dhawaaqday qalab cusub oo khadka tooska ah kujira: Tecno Spark 5. Qalab hooseeya oo ilaa afar dareemo gadaal ah.
Oppo A92 waa taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah oo leh Snapdragon 665 iyo ColorOS 7.1
Oppo A92-kan cusub ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay waana Oppo A72 oo caan ah oo dhawaan laga bilaabi doono dalka Malaysia.
Realme X50m 5G: Nooc miisaaniyadeed cusub oo ka tirsan qoyska X50
Realme ayaa ku dhawaaqday qalab cusub oo 5G ah oo ay ballanqaaday inay soo bandhigayso toddobaadkan. Kani waa Realme X50m, oo ah qalab dhexdhexaad ah oo laga fiirsanayo.
Oppo A72: Qalab cusub oo wata 6,5 ″ guddi, Snapdragon 665 iyo ColorOS 7
Oppo A72 waa aalad cusub oo heer-gal ah oo ka socota shirkadda Shiinaha. Waxaa looga dhawaaqay Jarmalka waxaana laga sii deyn doonaa Yurub markii hore.
Oppo A52 wuxuu rasmi u yahay Snapdragon 665 iyo ColorOS 7
Oppo waxay si rasmi ah u shaacisay A52 cusub, oo ah qalab dhex dhexaad ah oo si dhexdhexaad ah waxqabadkiisu u dhexdhexaad yahay jaleecada hore.
Oppo Find X2 Neo wuxuu ka muuqdaa dukaanka yurub oo leh 12 GB oo RAM ah iyo Snapdragon 765G
Khadadka Raadinta X2 ayaa ballaarin doona iyadoo la bilaabayo qayb cusub, oo ah Find X2 Neo. Qalab ka soo muuqday dukaan ku yaal Yurub.
Oppo A92S waa rasmi: Taleefanka cusub ee 5G ee leh processor Dimensity 800
Oppo A92S hadda waa rasmi ka dib markii dhowr waxyaalood oo sir ah ay soo baxeen, oo ay ku jiraan macluumaadka ku jira guddihiisa, midabada ay ku imaanayso iyo sawirrada qalabka.
Nubia Play waxay muujineysaa qeexitaankeeda koowaad, silhouette iyo sanduuqa iibka
Nubia waxay ku dhawaaqi doontaa 21-ka Maarso taleefan cusub oo la yiraahdo Nubia Play, aalad dhexdhexaad ah oo leh awoodda 5G.
Hisense F50 ayaa noqon doona telefoonkii ugu horreeyay ee 5G ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay
HiSense waxay soo bandhigi doontaa taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G ah ee loo yaqaan 'F50' Isniinta, aaladda oo isku darsanta jab ka soo saaraha shirkadda Unisoc.
Oppo A12 wuxuu maraa shahaadada Bluetooth oo muujinaya astaamaheeda
Oppo A12 wuxuu maraa shahaadada Bluetooth kahor intaan si rasmi ah loogu dhawaaqin oo muujinaya faahfaahin muhiim ah sida shaashadda, batteriga iyo waxyaabaha kale.
Vivo Y50 ayaa xaqiijisay: Taleefoon 6,53 ″ ah oo leh kamarad afar gees ah
Vivo Cambodia ayaa xaqiijisay taleefan cusub oo loogu talagalay suuqa Aasiya markii hore, Vivo Y50. Waa meel dhexdhexaad ah oo leh batteri wanaagsan.
Oppo Find X2 Lite wuxuu muujiyaa sawirkiisa iyo qeexitaankiisa
Sawirka buuxa iyo qeexitaanka Oppo Find X2 Lite, oo ah xubin cusub oo katirsan qoyska Find X2, ayaa lasoo saaray.
Infinix wuxuu soo bandhigayaa taleefannada cusub ee Note 7 iyo Note 7 Lite oo wata Android 10
Shirkadda soo saarta Hong Kong ee Infinix ayaa soo saartay laba taleefan oo cusub oo kala ah Note 7 iyo Note 7 Lite. Iyagu waa laba terminaal dhexdhexaad ah oo dhowaan iman doona.
5 sababood oo loo iibsado taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Cubot King Kong CS smartphone'
Haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo qaali ah qiimo macquul ah, waa inaad fiirisaa Cubot King Kong CS, oo ah taleefan casri ah oo ka yar $ 100.
Vivo S6 5G waa rasmi: Exynos 980 iyo 6,44-inch panel
Vivo S6 5G hadda waa rasmi ka dib daadad fara badan ka hor intaan la bilaabin suuqa Aasiya. Ogow dhammaan macluumaadka ku saabsan taleefankan cusub.
Oppo Reno Ace 2 wuxuu muujinayaa dhamaan astaamaheeda TENAA
Oppo Reno Ace 2 waa taleefanka soo socda ee shirkadda la bilaabayo, dhammaantood ka dib imaatinka labadeeda calanka Find X2.
Vivo S6 5G waxay muujineysaa naqshadeeda waxayna muujineysaa dareeraha ugu weyn ee 48 MP
Vivo waxay daaha ka rogtay sawirradii ugu horreeyay ee S6 5G, taleefan leh aalad weyn oo weyn oo soo gaari doonta toddobaad uun.
Vivo S6 wuxuu la imaan doonaa 5G, teaser-ka koowaad ayaa la muujiyay
Vivo S6 oo leh 5G waxaa lagu badalay modemka 5G waxayna ku noqon doontaa kacaan jiilka shanaad, iyo waxyaabo kale.
Blackview waxay u dabaaldegaysaa sanad-guuradii 7aad iyada oo hadiyado xiiso leh
Si loogu dabaaldego sanadguuradii 7aad ee sameynta taleefannada casriga ah ee Blackview, shirkaddu waxay bixinaysaa qiimo dhimis iyo bilaash xiiso leh
Realme C3 wuxuu muujinayaa dhammaan qeexitaankiisa kahor intaan lasoo bandhigin
Bogga Flipkart ee Realme C3 ayaa soo bandhigay dhammaan faahfaahinta taleefankan cusub oo la sii dayn doono Febraayo 6.
TCL Plex wuxuu bilaabaa inuu helo cusboonaysiinta Android 10
TCL waxay go'aansatay inay cusbooneysiiso terminalka Plex ka dib markii la bilaabay Oktoobar. Hel Android 10 iyo tan oo horumar ah.
Nokia way sii kululaaneysaa kahor MWC 2020: tani waxay noqon doontaa xadka soo socda ee soo socda
Waxaan kuu soo qaadaneynaa dhammaan faahfaahinta Nokia 4.3, taleefanka soo-gelitaanka soo socda ee shirkadda Finland oo lagu soo bandhigi doono MWC 2020.
OUKITEL C17 Pro, waxqabadka bartamaha dhexe oo leh kamarad seddex geesood ah oo ay saxiixday Sony iyo waxyaabo badan oo lagu bixiyo lacag aad u yar
Laga bilaabo Julaay 22 illaa 29, waad ka faa’iideysan kartaa dalabkan oo waxaad ka heli kartaa Oukitel Y4800 oo leh qiimo dhimis dhan 50 doollar oo ah qiimaha ugu dambeeya.
Haddii aad rabto inaad hubiso sida tayada kamaradaha Oukitel Y4800 ay tahay, waxaan kugu martiqaadayaa inaad iska hubiso naftaada fiidiyaha aan kugu tusinay qodobkaan.
Tijaabinta waxqabadka cusub ee Oukitel Y4800, oo ah terminaal suuqa ku dhufan doona bartamaha bisha Luulyo $ 199.
Tani waa sida Oukitel u tijaabiso tayada boosteejooyinkooda
Haddii aad rabto inaad hubiso tayada Oukitel K12 cusub, shirkaddu waxay na tusaysaa fiidiyoow aan ku aragno dhammaan tijaabooyinka ay ku qaadaan.
OUKITEL K12, 10.000 mAh baytari iyo inbadan oo dheeri ah
OUKITEL K12-ka cusub wuxuu na siinayaa batari aad u weyn oo ah 10.000 mAh oo ah jir qurxoon oo korka laga saaray maqaar gadaal ah iyo wax badan.
Waxaan ku baraynaa sida loo qaabeeyo smartwatch-ka Shiinaha si loo xaliyo dhibaatada ogeysiisyada saacadahaan casriga ah.
Isbarbardhigga u dhexeeya Oukitel Y4800 iyo Redmi Note 7
Haddii aadan haysan fasal aad ku tiraahdo Redmi Note 7 ama Oukitel Y4800, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato aqrinta si aad ugu go'aansato labada midkood.
Vivo Y15: Nooca cusub ee bartamaha
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Vivo Y15, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay Hindiya.
5 sababood oo loo iibsado Oukitel K9
Haddii aadan weli hubin in Oukitel uu yahay taleefanka casriga ah ee aad u baahan tahay, qodobkaan waxaan ku siinaynaa 5 sababood oo aad ku dhammaysan karto beddelaadda naftaada.
Shirkadda Aasiya ee Realme ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay qiimaha iyo helitaanka Realme 3 Pro, oo ah taleefankii ugu horreeyay ee si rasmi ah loogu iibiyo Spain
OPPO K3 ayaa si buuxda u daadatay: naqshadeynta iyo astaamaha la muujiyay
Shaandheeyey nashqadda iyo astaamaha OPPO K3, bartamaha cusub ee soo saaraha Aasiya oo u taagan kamaraddeeda lagala noqon karo si looga fogaado darajada.
Ragga ka socda Oukitel waxay soo saaraan qalab kala duwan oo loogu talagalay dhammaan miisaaniyadaha sanadka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in ...
Calaamadda Oukitel, K9 ayaa hadda loo heli karaa iibin horudhac ah iyadoo qiimo dhimis weyn lagu sameeyay qiimaha ugu dambeeya ee $ 249,99.
Shirkada Aasiya ee Oukitel ayaa bilaabi doonta K12 bisha Juun, terminal leh baatar xoolo dhan 10.000 mAh.
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Vivo S1 Pro, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee durba laga bilaabay suuqa.
Laga bilaabo 13-ka bisha soo socota ee May, waxaad awoodi doontaa inaad keydiso Oukitel K9 oo aad sidaas ku keydiso 50 doolar oo ah qiimaha ugu dambeeya suuqa.
Raadi wax badan oo ku saabsan bilaabista Vivo Z3X, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Meizu 16S ayaa iibiya maalintiisii ​​ugu horeysay ee iibka
Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka Meizu 16S maalintiisii ​​ugu horreysay Shiinaha halkaas oo lagu iibiyay saacado yar gudahood markii lagu iibinayay waddanka.
Red Magic 3 oo ka socda Nubia, taleefanka soo socda ee shirkadda Shiinaha, wuxuu marayaa Geekbench oo muujinaya natiijooyin cajaa'ib leh. Ha moogaan!
OPPO Reno ayaa si rasmi ah u yimid Yurub
OPPO Reno ayaa horey loogu soo bandhigay Yurubta iyo taariikhda ay bilaabi doonaan iyo qiimaha ay ku bilaabi doonaan horeyba waa loo xaqiijiyay.
Raadi wax badan oo ku saabsan OPPO A1K, taleefanka cusub ee ku jira qaybta hoose ee astaanta Shiinaha, oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Ruushka.
Soo ogow qeexitaanka ugu horreeya ee OUKITEL K12, taleefanka casriga ah ee cusub ee wata bateri weyn oo yimaadda guga.
Vivo waxay ku dhawaaqeysaa IQOO, nooc cusub oo shirkadeed ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan IQOO, sumadda cusub ee ay abuurtay Vivo waxayna diiradda saari doontaa qaybta ciyaaraha casriga ee Android.
Furan Umidigi One Max. Dhamaan 6.3 200 shaashad ka yar € XNUMX !!
Fiidiyowga aan kuugu keenayo fekerka & dareenka ugu horreeya ee Umidigi One Max, oo ah qurux dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo ka hooseeya 200 oo dollar.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee cusub, Vivo APEX 2019, taleefan casri ah oo cusub oo aan lahayn badhanno ama boosas. Ogow qeexitaankiisa hadda.
Ma ka fikireysaa cusbooneysiinta taleefankaaga casriga ah? Ka faa'iideyso dalabyadan TomTop
Ragga TomTop waxay noo soo bandhigeen dalabyo taxane ah oo aan ku cusbooneysiineyno terminaalkeena oo aanan seegi karin.
Redmi-kii ugu horreeyay ee wata 'Android Go' wuu ku sii dhowaanayaa kuna soo dhowaanayaa
Raadi wax badan oo ku saabsan Redmi Go, taleefankii ugu horreeyay ee sumadda ee leh Android Go oo la bilaabi doono waqti yar sida ku xusan dhowr xogo
Vivo Y89: Nooca cusub ee bartamaha kala duwan ayaa hadda rasmi ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida Vivo Y89, oo ah bartamaha cusub ee bartamaha Shiinaha ee horeyba rasmi ahaan loogu soo bandhigay
Hadda waxaad ku qaadan kartaa OUKITEL WP2 qiimaha ugu fiican
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan OUKITEL WP2 oo aad hadda ku qaadan karto qiimaha ugu fiican ee kor u qaadistaan ​​ah ee la heli karo illaa Janaayo 20.
Vivo Z1 waxaa laga bilaabay Shiinaha oo ah heer dhexdhexaad ah. Baro taas!
Vivo waxay noo keenaysaa Vivo Z1, bartamihiisii ​​dhexe ee cusub oo horeyba qayb uga ahaa buuga diiwaanka ee shirkadda oo leh qiimo aad ugu habboon waxa ay ballanqaadayso. Qalabkani wuxuu la yimid naqshad ina soo xusuusinaysa Apple ee iPhone X, oo ah sumadda hadda ee shirkadda Mareykanka. Waanu kugu balaarinay!
10-ka casriga ee ugu iibinta badan dalka Shiinaha sanadkii 2017
TOP 10 taleefannada casriga ah ee ugu iibinta badan dalka Shiinaha sannadka 2017. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan liiska taleefannada ugu iibsiga wanaagsan Shiinaha sanadkii hore.
Oppo R11 ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Shiinaha
Soo saaraha Shiinaha ee Oppo ayaa soo bandhigaya calankiisa cusub ee loo yaqaan 'Oppo R11', oo ah taleefan casri ah oo aad u awood badan, isla markaana leh tayo wanaagsan, laba kamaradood iyo qiimo jaban.
Vivo X7 iyo Vivo X7 Plus ayaa lagu muujiyay Shiinaha iyagoo wata Snapdragon 652 chip iyo 16MP camera
Vivo X7 iyo Vivo X7 Plus ayaa lagu soo bandhigay dalka Shiinaha iyaga oo wata qalab Snapdragon 652 iyo kamarad hore oo 16MP ah si ay u qaataan sawirada ugu fiican.
Xiaomi waa mar labaad xukunka weyn ee Shiinaha bishii Abriil
Bishii Abriil, Xiaomi waxay heshay 26 boqolkiiba saamiga suuqa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan adduunka, Shiinaha.
Kani waa Vivo X6SPlus
Terminal cusub oo heer sare ah oo ay Vivo leedahay ayaa la dusiyay. Kani waa Vivo X6SPlus.
Xperia Z3 ayaa lagu arkay keydka shahaadada Shiinaha
Xperia Z3 xilligan uma muuqato inuu wax badan ka duwan yahay kii ka horreeyay ee Z2 illaa iyo inta aan maanta garan karno
Xiaomi Mi4 horeyba waa loo heli karaa laakiin hadda kaliya Shiinaha
Xiaomi Mi4 waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu xiisaha badan xilligan, dhawaana wuu soo degi doonaa meel aad noogu dhow
Sawiradii ugu horreeyay ee LG G3 Mini ayaa ka muuqda Shiinaha
Sawiradii ugu horreeyay ee LG G3 Mini waa la soo dusay, halkaas oo aan ku arki karno naqshadiisa, oo loo raad raacay kii walaalkiis ka weynaa.